Umbala (igama elidala laseYiputa elithi " iwen" ) lithathwa njengengxenye ebalulekileyo yento okanye umntu kwiYiputa YaseYiputa, kwaye eli gama lingatshintsha ngokuthe ngileyo umbala, ukubonakala, umlinganiso, okanye ubunjani. Izinto ezinemibala efanayo zikholelwa ukuba zinempahla efanayo.
Imibala yayihlala idibene. Isilivere negolide zazibhekwa njengemibala ehambelanayo (oko kukuthi babumba ukuphikisana kwelanga kunye nenyanga). Olubomvu ogqityiweyo umhlophe (cinga ngesithsaba esiphezulu saseYiputa), kwaye uhlaza kunye nomnyama kwakumele imiba eyahlukileyo kwinkqubo yokuhlaziywa kwakhona. Apho ukulandelelana kwamanani kufanekisiwe, amathoni ekhumba ahamba phakathi kwe-ocher ekhanyayo.
Ukungcola kombala kubalulekile kumaYiputa aseMandulo kwaye umculi wayeqhele ukugqiba yonke into embala omnye ngaphambi kokuba uqhubele phambili. Imizobo iza kugqitywa nge-brush emihle ukucacisa umsebenzi kwaye ungeze iinkcukacha ezingaphakathi.
Iqondo apho abaculi baseYiputa baseMakedeni kunye nabadwebi bezobugcisa baxutyana ngokwemizalwane. Kodwa nangona kuluhlu lwalo lwendalo, ukudibanisa umbala kwakungekho kusasazeka. Ngokungafani neengulube zanamuhla ezinika iziphumo ezihambelanayo, ezininzi zala ma-artiste aseYiputa zasendulo zaziyosabela ngokwasemzimbeni; umzekelo, uholele umhlophe xa uxutywe ne-orpiment (ophuzi) ngokwenene uvelisa omnyama.
Umbala Omnyama Nemhlophe EYiputa YaseYiputa
Umnyama (igama elitsha laseYiputa igama elithi " kem" ) ngumbala we-silt ophilisa ubomi oshiywe yi-Nile, okubangela ukuba igama elidala laseYiputa libe lizwe: " kemet" - umhlaba omnyama. Umnyama ubonakalisa ukuzala, ubomi obutsha novuko njengoko kuboniswa ngumjikelezo wonyaka wezolimo. Kwakunjalo nombala ka-Osiris ('umnyama'), unkulunkulu ovusiweyo wabafileyo, kwaye wayebhekwa njengombala we-underworld apho kwakusithi ilanga livuselelwe ubusuku bonke. Umnyama wawudla ngokusetyenziswa kwiimifanekiso kunye neengqungquthela ukukhupha inkqubo yokuhlaziywa okuchazwe kuthixo u-Osiris. Umnyama wawusetyenziswe njengombala osemgangathweni weenwele kwaye ubonise umbala wesikhumba wabantu abavela kumazantsi ase-Nubians namaKushe.
Igama elimhlophe laseYiputa elithi " hedj" ) laliyimbala yobungcwele, ubungcwele, ukucoceka nokulula. Izixhobo, izinto ezingcwele kunye nezicathulo zompristi zazingumhlophe ngenxa yesi sizathu. Izilwanyana ezingcwele zazibonakaliswe zimhlophe. Izambatho, ezazidla ngeelinen ecocekileyo, ngokuqhelekileyo zazibonakaliswe zimhlophe.
Isiliva (eyaziwayo ngegama elithi "hedj," kodwa ebhaliweyo kunye nenqununu yesitye esinqabileyo) imele umbala welanga entambama, kunye nenyanga kunye neenkwenkwezi. Isilivere yayisisimboli esinesigqabi kunegolide kwiYiputa YaseYiputa kwaye yayibaluleke kakhulu.
Imibala Ebomvu eYiputa YaseYiputa
Igama eliluhlaza okwesibhakabhaka (igama elitsha laseYiputa elithi " irtyu" ) ngumbala wamazulu, ubukhosi boothixo, kunye nombala wamanzi, ukuhlambuluka kwonyaka kunye nekhukula. Nangona amaYiputa aseMandulo adluliselwa ngamatye anqabileyo anjenge-azurite (igama laseYiputa elidala elithi " tefer " kunye ne-lapis lazuli (igama elitsha laseYiputa elithi " khesbedj," elithengiswa ngexabiso elikhulu kwiNtaba yaseSinayi yezobucwebe kunye ne-inlay, iteknoloji yayiqhubekile ngokwaneleyo ukuvelisa Ngokwexesha lokuqala lobuninzi be-pigment, eyaziwayo ukusuka kwixesha elidlulileyo njenge-blue blue. .
Uluhlaza okwesibhakabhaka lwasetyenziselwa iinwele zothixo (ngokukhethekileyo i-lapis lazuli, okanye i-darkest blues yaseYiputa) kunye nobuso bukaThixo u-Amun - umkhanyo owenzelwa kwalabo baFaro abadibene naye.
Imibala Eluhlaza KwiYiputa YaseYiputa
Oluhlaza (igama elidala laseYiputa elithi " wahdj " " laliyimbala yokukhula okutsha, izityalo, ubomi obutsha kunye novuko (okukugqibela kunye nombala omnyama). I-hieroglyph yokuluhlaza i-papyrus stem kunye nesondlo.
Uhlaza kwakuwumbala we " Iiso leHorus ," okanye "i- Wedjat," eyayinamandla okuphilisa kunye nokukhusela amandla, ngoko ke umbala ubonisa ukuhlala kakuhle. Ukwenza "izinto eziluhlaza" kwakufuneka ziphathe ngendlela efanelekileyo, yokuqinisekisa ubomi.
Xa kubhaliwe kunye nemilinganiselo yeemigodi ( iintlanzi ezintathu zesanti) " wahdj" iba lizwi le-malachite, umbala omelela uvuyo.
Njengombala ohlaza okwesibhakabhaka, amaYiputa aseMandulo angaphinda avelise i-pigment-verdigris (igama elitsha laseYiputa elithi " hes-byah" - okwenyaniso lithetha ubhedu okanye ubhedu.) Ngelishwa, i-verdigris iphendula nge-sulphide, kwaye ijika emnyama. (Abaculi bexesha eliphakathi baya kusebenzisa i-glaze ekhethekileyo ngaphezulu kwe-verdigris ukuyikhusela.)
I-Turquoise (igama elitsha laseYiputa elithi " mefkhat" ), ilitye eliluhlaza-oluhlaza okwesibhakabhaka elalivela kwiSinayi, nalo lalimelela uvuyo, kunye nombala weemitha zelanga. Ngobubungqina beHathor, i-Lady of Turquoise, owayephethe i-destiny yezinsana ezizalwe ngokutsha, kunokubhekwa njengombala wesithembiso kunye nokubikezela.
Imibala Ephuzi kwiYiputa YaseYiputa
Ephuzi (igama laseYiputa elitsha elithi " khenet" ) laliyimbala yesikhumba samabhinqa, kunye nolusu lwabantu ababehlala kufuphi neMeditera - iLiby, iBedouin, amaSiriya namaHeti. Ephuzi kwakunombala welanga kwaye, kunye negolide, ingabonisa ukufezeka. Njengomhlaza okomhlaza nokuluhlaza, amaYiputa aseMandulo avelisa i-antimonite enobumba obunobumba obunobumba - igama lakwaMandulo laseYiputa, nangona kunjalo, alingaziwa.
Xa ukhangela ubugcisa bamandulo baseYiputa namhlanje kunokuba kunzima ukuhlula phakathi kwe-antimonite ye-lead, (yinto ephuzi ephuzi), umgca omhlophe (oluhlaza okwephuzi kodwa unokuthi ube mnyama ngaphezu kwexesha) kunye ne-orpiment (i-yellow yellow. ilanga). Oku kuye kwabangela abanye ababhali-mlando bezembali ukuba bakholelwe ukuba umhlophe kunye nohlobo oluphuzi bezitshintshana.
I-Realgar, esiyicinga njengombala we-orange namhlanje, yayiza kubalwa njengephuzi. (Igama le-orange alizange lisetyenziswe kwaze kwafika isiqhamo eYurophu evela e-China ngamaxesha aphakathi-enoba uCennini ebhala kwinkulungwane yeshumi le-15 uchaza njengoluphuzi!)
Igolide (igama elitsha laseYiputa elitsha "elitsha" ) lalimelela inyama yonqulo kwaye lisetyenziselwa nayiphi na into eyayicatshangelwa ingunaphakade okanye ingabhubhi. (Igolide yayisetyenziswe kwi-sarcophagus, umzekelo, ngenxa yokuba uFaro wayebe nguothixo.) Nakuba iigqabi zegolide zingasetyenziselwa ukubunjwa, i-yellow or reddish-yellows yayisetyenziswe kwimifanekiso yelinen yonqulo. (Qaphela ukuba abanye oothixo babenemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okanye emnyama.)
Imibala Ebomvu KwiYiputa YaseYiputa
Olubomvu (igama elitsha laseYiputa elithi " deshr" ) ngokuyinhloko ngumbala weengxabano kunye neengxaki - umbala wentlango (igama elidala laseYiputa elithi " lihlazo," umhlaba obomvu) owawuthathwa njengecandelo elimnyama lomhlaba omnyama (" kemet" ) . Enye yeenqwanqqqqqqqqu ebomvu, i-ocher ebomvu, yafunyanwa entlango. (I-hieroglyph ebomvu yi-hermit ibis, intaka leyo, ngokungafani nezinye i-Egypt yaseYiputa, ihlala kwindawo eyomileyo kwaye idle inambuzane kunye nezidalwa ezincinci.)
Olubomvu kwakunombala womlilo owonakalisayo kunye nobushushu kwaye isetyenziswe ukumela into eyingozi.
Ngobudlelwane balo nentshonalanga, obomvu waba ngumbala wothixo uSete, unkulunkulu wendabuko weengxabano, kwaye wahlanganiswa nokufa-intlango yayiyindawo apho abantu babanjwe khona okanye bathunyelwa kusebenza kwimigodi. Intlango yayibonwa njengangena emngcwabeni apho ilanga lanyamalala ubusuku bonke.
Njengengqungquthela, obomvu bekubhekwa njengento eyahlukileyo kumbala omhlophe. Ngokubhekiselele ekufeni, kwakungekho ulwahlulo oluhlaza kunye nomnyama.
Nangona obomvu beyona mininzi yimibala yonke eYiputa YaseYiputa, kwakunombala wobomi kunye nokukhuselwa-okuvela kumbala wegazi kunye namandla okuxhasa ngomlilo. Kwakusetyenziswe ngokuqhelekileyo ukukhusela.
Iindlela ezikhoyo zanamhlanje kwiYiputa yaseYiputa imibala
Imibala engadingi ukutshintshwa:
Ivory kunye neLamp Black
Ochs Red and Yellow Ochres
I-Chalk White - iTitanium emhlophe
I-White White - I-Flake White, kodwa unokwenza u-Titanium Omhlophe ugcine ngephuzi.
I-tone yaseYiputa yaseBlue Blue - I-Cobalt Turquoise
I-Blue Blue yaseGibhithe - Ultramarine
I-Malachite - iGreen engapheliyo okanye i-Phthalo Green
I-Chrysocolla - Ukukhanya kweCobalt Green
I-Orpiment - iCadmium ephuzi
Inkokheli yeAntimonite - i-Naples Yellow
Realgar - Bright-Red okanye Orange-Red
IGolide - sebenzisa ipeyinti yegolide yelitye, ngokukhethekileyo kunye ne-hue ebomvu (okanye ngaphantsi kwesibomvu)
I-Lead Lead - i-Vermilion Hue
IMadder Lake - iArizarin Crimson
I-Kermes Ichibi - iCrimson engapheliyo
Iimephu zamazwe ase-Afrika
Ukuqonda iMpembelelo ye-Deep Scuba Diving